Yeremia 46 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
46 Yehowa asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn wɔ amanaman+ no ho ni. 2 Egypt+ de: Egypt hene Farao Neko+ asraafo a wɔwɔ asubɔnten Eufrate ho wɔ Karkemis+ a Babilon hene Nebukadresar dii wɔn so nkonim wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no afe a ɛto so anan mu no ho asɛm ni: 3 “Munsiesie nkatabo ne akyɛm akɛse na monkɔ ɔko.+ 4 O apɔnkɔsotefo, munsiesie apɔnkɔ na montenatena so, na monhyehyɛ dade kyɛw nnyinagyina hɔ. Muntwiw mpeaw ho. Monhyehyɛ akotade.+ 5 “‘Dɛn nti na mihu wɔn sɛ wɔabɔ hu yi? Wɔasan wɔn akyi, na wɔabobɔ wɔn nnɔmmarima pasaa; wɔaguan a wɔantwa wɔn ani.+ Ehu nko ara na atwa wɔn ho ahyia,’+ Yehowa asɛm ni. 6 ‘Mma ɔhoɔharefo nnyɛ sɛ ɔreguan, na mma ɔdɔmmarima nnyɛ n’adwene sɛ obefi hɔ akɔ.+ Wɔahintihintiw ahwehwe ase wɔ atifi+ fam, asubɔnten Eufrate ano.’+ 7 “Hena na ɔreba sɛ Asubɔnten Nil ne nsubɔnten a emu nsu bu fa so yi?+ 8 Egypt foro ba te sɛ Asubɔnten Nil,+ ɔba te sɛ nsubɔnten a emu nsu bu fa so.+ Na ɔka sɛ, ‘Mɛforo akɔ. Meyiri akata asase so. Mɛka me ho akɔsɛe kurow no ne emufo.’+ 9 Apɔnkɔ, momforo nkɔ ɛ; nteaseɛnam, munnye bum! Momma nnɔmmarima mforo nkɔ, Kus+ ne Put+ mmarima a wokurakura akyɛm ne Ludim+ mmarima a wokurakura agyan na wokuntun mu no. 10 “Ɛda no yɛ Awurade Tumfoɔ, asafo Yehowa da, aweredi da a ɔbɛtɔ n’atamfo so were.+ Na nkrante bedi nam na ɛbɛnom wɔn mogya amee, na Awurade Tumfoɔ,+ asafo Yehowa bɛbɔ afɔre+ atifi fam asase no so, asubɔnten Eufrate+ ho. 11 “O ɔbaabun, Egypt babea,+ foro kɔ Gilead kɔpɛ balsam+ ngo. Woama wo nnuru adɔɔso kwa. Ayaresa bi nni hɔ mma wo.+ 12 Amanaman no ate w’animguase,+ na wo sũ ahyɛ asase no so ma.+ Ɔdɔmmarima hintiw ɔdɔmmarima so,+ na wɔn baanu nyinaa hwehwe ase.” 13 Asɛm a Yehowa ka kyerɛɛ odiyifo Yeremia wɔ Babilon hene Nebukadresar ho sɛ ɔbɛba abɛsɛe Egypt asase+ no ni: 14 “Monka wɔ Egypt, mommɔ dawuru wɔ Migdol,+ na mommɔ dawuru wɔ Nof+ ne Tapanes.+ Monka sɛ, ‘Gyina hɔ, na siesie wo ho,+ efisɛ nkrante bedi nam atwa wo ho ahyia.+ 15 Dɛn nti na wɔahohoro w’atumfoɔ kɔ yi?+ Wɔantumi annyina, efisɛ Yehowa na wapam wɔn.+ 16 Wama bebree ahintihintiw, na wɔahwehwe ase nso. Wɔkeka kyerɛ wɔn ho sɛ: “Sɔre, ma yɛnsan nkɔ yɛn nkurɔfo nkyɛn ne yɛn abusuafo asase so, atirimɔden nkrante no nti.”’ 17 Ɛhɔ na wɔteɛm sɛ, ‘Egypt hene Farao ano yɛ den kwa.+ Wama afahyɛ bere atwam.’+ 18 “‘Sɛ́ mete ase yi,’ Ɔhene a ne din de asafo Yehowa no asɛm ni,+ ‘sɛnea Tabor+ si mmepɔw mu na Karmel+ si po ho no, saa na ɔbɛba. 19 Hyehyɛ nkoasom nneɛma,+ O Egypt babea+ a wote kurow no mu. Na Nof+ bɛdan ahodwiriwde, na wɔde ogya bɛhyew, na obi rentena mu.+ 20 Egypt te sɛ nantwibere kumaa a ne ho yɛ fɛ paa. Atifi fam na ntontom befi aba ne so.+ 21 Asraafo a wabɔ wɔn paa a wɔabɛka wɔn ho no nso te sɛ anantwi mma+ a wɔadɔ srade. Wɔn nso adan wɔn ho abom aguan.+ Wɔantumi annyina,+ efisɛ wɔn amanehunu da aba wɔn so, wɔn akontaabu da no.’+ 22 “‘Ne nne te sɛ ɔwɔ a ɔtwe ne ho ase;+ mmarima de ahoɔden kɛse bɛba, na nkuma na wɔde bɛba ne so te sɛ wɔn a wobu nnua. 23 Wobebu ne kwae+ agu, efisɛ ɔkwan nna mu,’ Yehowa asɛm ni. ‘Wɔdɔɔso sen mmoadabi;+ wɔn dodow nni ano. 24 Egypt babea+ ani bewu. Wɔde no bɛhyɛ atifi famfo nsa.’+ 25 “Asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka sɛ, ‘Hwɛ, mede m’ani resi Amon+ a ɔwɔ Noh+ no so, ne Farao so ne Egypt so ne n’anyame+ so ne n’ahene+ so, ne Farao ne wɔn a wɔde wɔn ho to no so+ nyinaa so.’ 26 “‘Na mede wɔn bɛhyɛ wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn kra no nsa; mede wɔn bɛhyɛ Babilon hene Nebukadresar+ ne ne nkoa nsa, na ɛno akyi no, nnipa bɛtena mu bio sɛ kan no,’+ Yehowa asɛm ni. 27 “‘Na wo, m’akoa Yakob, nsuro, na mma wo bo nntu, O Israel.+ Megye wo nkwa wɔ akyirikyiri, na magye w’asefo afi wɔn nkoasom asase so.+ Na Yakob bɛsan aba, na ne ho bedwo no na watena hɔ dwoodwoo a obiara renyi no hu.+ 28 Na wo, m’akoa Yakob, nsuro,’ Yehowa asɛm ni, ‘efisɛ meka wo ho.+ Mɛhyew aman a mabɔ mo ahwete so no nyinaa ase,+ na wo de, merenhyew w’ase.+ Nanso mɛteɛ wo so sɛnea ɛfata,+ na meremma womfa wo ho nni.’”+